२५ प्रतिशत नेपालीमा उच्च रक्तचाप » खबरहरुको एउटै केन्द्र
शुक्रबार, जेष्ठ ४, २०७५ १३:४६ मा प्रकाशित !
काठमाडौँ, ३ जेठः पछिल्लो समय धेरै नेपालीलाई उच्च रक्तचापको समस्या देखिन थालेको छ । स्वस्थकर खानपान, शारीरिक व्यायाम, मानसिक तनावजस्त कारणले उच्चरक्तचापलाई बढाइरहेको छ । मसिनी विकले उच्च रक्तचापको समस्या भएर औषधि खान थालेको वर्ष दिन भयो । सिक्रे नुवाकोटकी विक गाउँमै औषधि नपाइने भएकाले काठमाडौँ आएर औषधि लाने गरेको बताउनुहुन्छ । उहाँले चिकित्सकको सल्लाहानुसार नियमित रुपमा औषधि सेवन गर्दै आउनुभएको छ ।
नेपालमा गरिएका पछिल्ला सर्वेक्षणअनुसार युवामा हुने हृदयाघातको ५० प्रतिशत कारण उच्च रक्तचाप हो । मस्तिष्काघातमा ७४ प्रतिशत र मिर्गौला खराबी हुनुमा ९० प्रतिशत कारण पनि उच्च रक्तचाप भएको पुष्टि गरेको चिकित्सक अनिलको भनाइ छ । उहाँले यस्ता पीडितले नियमित औषधि खानुपर्ने र हरेक एक वर्षमा रगतमा चिल्लो चिनीको मात्रा र उच्च रक्तचापको मात्रा जाँच गराउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । (रासस)
PREVIOUS POST Previous post: आजको राष्ट्रियसभा बैठकमा सरकारको आलोचना
NEXT POST Next post: बिहे अघिका सबै गोपनियता खोल्दै बल्छी धुब्रेकी श्रीमतीले भनिन् ११ वटा बच्चा पाउने योजना छ
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते शुक्रबार, जेष्ठ ४, २०७५ १३:४६
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस शुक्रबार, जेष्ठ ४, २०७५ १३:४६
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण शुक्रबार, जेष्ठ ४, २०७५ १३:४६
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी शुक्रबार, जेष्ठ ४, २०७५ १३:४६
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? शुक्रबार, जेष्ठ ४, २०७५ १३:४६